(सोलुखुम्बु बाट पठाईएको)
शेर्पा जाति, कुलुङ, थुलुङ, बाहिङ, नाछिरिङ, खालिङ बाहुन, क्षेत्री, तामाङ, मगर, गुरुङ, नेवार, दमाई, कामी, सार्की आदि आदि
सोलुखुम्बु जिल्ला (शेर्पा भाषा: ཤར་ཁུམ་བུ་རྫོང་ཁ།, Wylie: shar khum bu dzong kha ), नेपालको पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको सगरमाथा अञ्चलको उत्तरी भागमा अवस्थित हिमाली जिल्ला हो। विश्व सम्पदा सूचीमा सुचिकृत नेपालको पहिचान (शेर्पा भाषा: ཇོ་མོ་གླང་མ།, Wylie: jo mo glang ma ) सगरमाथा हिमाल यसै जिल्लामा पर्दछ। पूर्वाञ्चलमा सडक सुविधासँग आवद्ध भएको मात्र जिल्ला भएतापनि यहाँका मनोरम हिमशिखर र उच्च पर्वतीय क्षेत्र विश्व मानचित्रमा नै प्रसिद्ध रहेको छन। यस जिल्लालाई पर्यटकहरूको सांग्रिला भनेर पनि चिनिन्छ। विश्वका साहसी तथा प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विषयमा चाख राख्नेहरूको लागि यस जिल्लाले सधै आकर्षित गरिरहेको पाइन्छ। यस जिल्ला पूर्वाञ्चलका जिल्लाहरूमा सबभन्दा कम जनघनत्व भएको जिल्लामा पर्दछ। यो जिल्लामा ३१ वटा गाउँ विकास समितिहरू छन र १ नगरपालिका छ।
७ व्यापारिक महत्वका स्थानहरू
यस प्रदेशमा महालंगुर र अन्य हिमश्रृङ्खलाहरू पर्दछन। विश्वको सर्वोच्च चुचुरा सगरमाथा हिमाल यसै प्रदेशमा पर्दछ। यस जिल्लाको प्रमुख गौरवको रूपमा रहेको यो क्षेत्र पर्वतारोहण र दृष्यावलोकनका लागि विश्व प्रसिद्ध छ। उच्च हिमाली क्षेत्र यस प्रदेशमा महालंगुर र अन्य हिमश्रृंखलाहरू पर्दछन् । विश्वको सर्वोच्च चुचुरा (शेर्पाभाषा: ཇོ་མོ་གླང་མ།, Wylie: jo mo glang ma ) सगरमाथा यसै क्षेत्रमा पर्दछ । महालंगुर श्रृंखलाको शिखर सगरमाथा (८८४८ मि.) शिरमा रहेको छ । अन्य प्रमुख हिमशिखरहरूमा ལྷོ་རྩེ། ल्होचे (८५१६ मि.), चोयु (८२०१ मि.), ग्याचुङगाङ (७९५२ मि.), ནུབ་རྩེ། नुबचे (७८५५ मि.), चामलाङमा (७२७६ मि.), पुमोरी (७१६१ मि.), आमाडव्लम (६८१२ मि.), थाम्सेर्कु (६६२३ मि.), नुम्बुर (६९५७ मि.), ल्होचेशर (८४०० मि.), पासाङ्गल्हामू (७३५१ मि.) पर्दछन् । यस जिल्लाको प्रमुख गौरवको रुपमा रहेको यो क्षेत्र पर्वतारोहण र दृष्यावलोकनका लागि विश्व प्रसिद्ध छ ।
सल्यान स्थित महादेब मन्दिर काेटिहाेम
प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको एउटा धार्मिक स्थल हो दुधकुण्ड । नेपालमा दुधकुण्ड जस्ता थुप्रै धार्मिकस्थलहरु छन् जसले राम्रो प्रचार पाएका छन् र स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरुको ओइरो लाग्ने गर्छ । सोलुखुम्बु जिल्लाको टाक्सिन्दु गा.वि.स. मा अवस्थित यो पवित्र धार्मिक स्थल पर्यटनको दृष्टिले एउटा सुन्दर गन्तव्य बन्न सक्छ । चार हजार ६ सय मिटरको उचाइमा रहेको दुधकुण्डमा हरेक भाद्र जनै पूर्णिमामा भव्य मेला लाग्ने गर्छ । केही दर्शनार्थीहरु आफ्नो समयानुकुल।एक दिन अगावै अर्थात चतुर्दशीकै दिन दर्शन गरेर फर्कने गर्छन् । यहाँ सोलुखुम्बु लगायत अन्य।छिमेकी जिल्लाका श्रद्धालु भक्तजनहको भीड लाग्छ । नुम्बुर हिमालको काखमा रहेकाले यसको सौन्दर्य अझ बढेको छ ।
उच्च ठाउँको कठ्याङ्ग्रिदो जाडोको पनि कुनै पर्वाह नगरी तीर्थालुहरु दर्शनका लागि यहाँ आउछन् । युवा युवतीदेखि बृद्धबृद्धासम्म दर्शन गर्न यहाँ आउछन् । मनले चिताएको काम पूरा हुने, सन्तान प्राप्ति हुने, धनलाभ हुने जस्ता धार्मिक विश्वास रहेको छ । दुधकुण्ड यस्तो। ठाउँ हो जहाँ हामीले स्वणीम आनन्दको अनुभूति गर्न सक्छौं । सारा दुख, दर्द, पीर–व्यथा आदि भुल्न सकिन्छ । यहाँ सुरक्षाका बारेमा ढुक्क भएर जान सकिन्छ । लेक लागेर बिरामी भए पनि रेडक्रसले निशुल्क रुपमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको हुन्छ । त्यस्तै कुनै पनि अप्रिय घटना घट्न नदिनका लागि सेना र प्रहरी खटाइएका हुन्छन्। खाना र बस्नका लागि अस्थायी होटलहरु खोलिएका छन् ।नेपालमा हजारौंको सङ्ख्यामा विदेशी पर्यटकहरु आउछन् । जसमध्यको केही अंश मात्र यहाँ भ्रमण गर्न गएमा दुधकुण्डको प्रचार त हुने नै भयो यसका अलवा यस क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तरमा सुधार आउन जान्छ । अहिले नगण्य रुपमा विदेशी पर्यटकहरु दुधकुण्ड जाने गरेका देखिन्छन् । यसलाई ट्रेकिङ रुटको रुप दिन अझै सकिएको छैन । हिमालको दृष्यमा रमाउन चाहने पर्यटकका लागि अन्नपूर्ण आधार शिविर पुग्नै पर्दैन । किनकि दुधकुण्डबाटै हिमालको रमणीय दृष्य मज्जाले अवलोकन गर्न सकिन्छ । थोरै खर्चमा हिमालमको मनमोहक दृष्यको मज्जा लिन जो कोही पनि एक पटक जानै पर्ने ठाउँ हो दुधकुण्ड ।एक पटक गएपछि पटक पटक जाऊँ जाऊँ लाग्ने बनाउछ । दुधकुण्डमा पानीको रङ दुध जस्तै भएकाले यसलाई दुधकुण्ड भनिएको भनाइ छ । यसको उत्पति कहिले भएको हो यसका बारेमा कसैले पनि भन्न सकेको छैन । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उपशाखा टाक्सिन्दुमा सल्लाहकार छोङबा शेर्पाका अनुसार पृथ्वीको उत्पतिसँसँगै यसको उत्पति।भएको हुन सक्छ । यस कुण्डमा कति घनमिटर पानी अटेको छ भनेर पनि अलिलेसम्म मापन गरिएको पाइदैन । जे भए पनि त्योसँग पर्यटकले कुनै सवाल राख्दैनन् । यसको अपार सौन्दर्यमा रम्नमै यहाँ पुग्ने मानिस व्यस्त हुने छन् । परापूर्व कालदेखि दुधकुण्ड मेला जाने गरिएको छ । तीनदेखि पाँच दिनसम्म समय छुट्याएर यहाँ दर्शन गर्ने उद्देश्य लिएर मानिसहरु यस पवित्र भूमिमा आउने गर्छन् । वास्तवमा ती तीर्थयात्रीहरु पर्यटक नै रहेछन् । हामीले थाहै नपाई आन्तरिक पर्यटनलाई माथि उठाइरहेका रहेछौ्रं ।
दुधकुण्डलाई प्रचार प्रसारमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकतालाई पछिल्लो समयमा आएर धेरैले चासो दिन थालेको पाइएको छ । विभिन्न सञ्चार माध्यमका सञ्चारकर्मीहरु त्यहाँ देखिए । नेपाल टेलिभिजन, एभिन्युज, सोलु अनलाइन,सोलुखुम्बु अनलाइन जस्ता सञ्चार माध्यमका सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थिति थियो ।।उसरी पर्दामा नआएका अथवा कम आएका महत्वपूर्ण स्थलहरुलाई संसारभरि चिनाउने उत्तरदायित्व सञ्चार माध्यमहरुले लिन जरुरी छ । आमसञ्चारको विकास र विस्तारले संसारलाई एउटा ग्वबल भिलेजको रुपमा परिणत भइसकेको छ । यसर्थ विभिन्न महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलहरुको प्रबद्र्धन।गर्न सजिलो भएको छ । पर्यटनमा लागि पदयात्रा सुरु भई सके पनि यो सुरुवात मात्र भएको हो । यसलाई व्यवस्थित रुट बनाउन अझै धेरै व्यवस्थापनको खाँचो छ । स्थायी होटल तथा लजहरु खोल्न आवश्यक छ। र होटल तथा लजहरु खोल्न सम्भव नहुने ठाउँहरुमा सुविधा।सम्पन्न क्याम्पिङ स्थलहरु कनाउन सकिएको खण्डमा दुधकुण्डस्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य बन्ने कुरामा दुई मत छैन । यसका लागि टाक्सिन्दुवासी र समग्र सोलुवासी जागरुक हुनु पर्छ । ।
सोलुखुम्बु जिल्ला परीक्षण को [खाम भाषाको विकिपिडिया] हाल विकिमीडिया इन्कुवेटरमा रहेको छ ।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=सोलुखुम्बु_जिल्ला&oldid=722033" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक ००:२०, २२ अप्रिल २०१९ मा परिवर्तन गरिएको थियो।